Lake Titicaca: sifooyinka, asalka iyo cimilada | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 14/01/2022 10:00 | Ciencia
El Harada Titicaca waxa ay leedahay biyo aad u badan oo ku daboolan dhulka Peru iyo Bolivia, waxa kale oo lagu tiriyaa in ay tahay harada ugu saraysa aduunka, waxa ay leedahay biyo mareen, ku haboon kalluumaysiga, waxa kale oo ay leedahay jasiirado sabbaynaya oo korkeeda laga dhisay, halkaas oo ay ku yaalaan. waa bulsho dhamaystiran. Waxa kale oo loo yaqaan Badda Andes.
Maqaalkan waxaan kuu sheegi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Lake Titicaca, asalkeeda iyo sifooyinkeeda.
2 Asal ahaan harada Titicaca
3 Cimilada harada Titicaca
Harada Titicaca waa mid ka mid ah harooyinka ugu cajaa'ibka badan adduunka waxayna ku taal joog dhan 3.812 mitir. Juquraafi ahaan gaar ahaan meesha ay ku taal awgeed, waxay leedahay gaar ahaanshaha ay wadaagaan labada dal ee Bartamaha Ameerika, taas oo ay u leedahay. 56% dhalashada Peruvian iyo 44% dhalashada Bolivia.
Laakin tayadiisa halkaas kuma eka, sababtoo ah marka aynu barbar dhigno ballaadhinteeda 8.560 kiiloo mitir oo laba jibbaaran iyo harooyinka kale ee gobolka Latin America, Harada Titicaca waa harada labaad ee ugu weyn dhulkan ballaaran. Cabbirkeedu waxa uu dhan yahay 204 kiiloomitir dhinac ka xiga, waxaana xadhkaha goostay oo dhan 1.125 kilomitir oo xeeb ah uu xuduud la leeyahay oogadiisa, taas oo sidoo kale ka dhigaysa harada ugu sareysa uguna badan ee la mari karo adduunka.
Intaa waxaa dheer, harada quruxda badan waxay leedahay in ka badan 42 jasiiradood oo gudaha ah, oo ay ugu caansan tahay Isla del Sol, oo aad uga habboon kuwa kale sababtoo ah Boqortooyada Inca ayaa ka soo jeeda halkaas, sidaas darteed waxay soo bandhigaysaa taxane taxane ah oo qayb ka ah tan. ilbaxnimada qadiimiga ah caddaynta jiritaanka. Maalmahan, dadkeedu inta badan waa asal, in kasta oo ay saameyn ku leeyihiin caadooyinka casriga ah, ilaashadaan inta badan dhaqamadoodii Inca.
Asal ahaan harada Titicaca
Xoogaga Tectonic waxa sababa magma-ga dhulka, tamarta-geothermal-kana waxa ay isu beddeshaa tamar farsamaysan oo sababa dhaqdhaqaaqa isku xidhka taarikada dhulka hoostiisa ee ka kooban qaaraddeena. Asalka harada Titicaca waxaa sabab u ah ciidamadan tectonic-ka ah ee sababa in safafka bari iyo galbeed ee buuraha Andes ee Bartamaha Ameerika ay kor u kacaan. Awoodda dhaqdhaqaaqani waxay soo saartaa samaynta plateaus, kuwaas oo ah gargaarka sare ee fidsan. Taaggan waxaa loo yaqaan magaca Meseta de Collao.
Collao Plateau, oo ku yaal in ka badan 3.000 mitir oo joog ah, waxay ilaaliyeen biyaha baraf intii lagu jiray xilligii Barafka, markaa hababka dhigista ma dhicin. Tani waxay u ogolaatay inay sii haysato qaabkeeda iyo qoto dheerkeeda, markaa markii xilliga interglacial dhacay, barafku wuu dhalaalay oo noqday harada Titicaca, oo hadda loo yaqaan harada Titicaca.
Cimilada qallafsan iyo cimilada qalalan ee dooxooyinka intra-caudal ee Peru iyo Bolivia waxay sidoo kale saameeyaan dheecaankooda ugu yar iyo kuwa gaabis ah, taas oo gacan ka geysaneysa sii jirista jidhkan ballaaran ee biyaha.
Daraasado ballaaran oo lagu sameeyay nidaamka harada taagga ayaa muujisay in harada Titicaca ay tahay natiijada kobcinta nidaam aad u qadiimi ah oo soo bilowday xilligii Pleistocene ee hore, 25,58 ilaa 781,000 sano ka hor, oo u wareegay dhamaadka Pliocene.
Isbeddelka cimilada ee dhacay xilliyadan, oo u dhexeeya cimilo aad u kulul ilaa qabow iyo cimilo qoyan, waxay si toos ah u saamaysay jiritaanka iyo baaxadda harada Titicaca iyo harooyinka kale ee taagga ah. Isla dhacdo la mid ah, buuraha Cordillera waxaa jabay xoogagga tectonic waqooyi-koonfur. Ugu dambeyntii, Pleistocene Hoose 2,9 milyan oo sano ka hor, ka dib asalkii harada Cabana iyo ka hor jiritaanka harada Baliwan, waxaa la sameeyay god tectonic kaas oo ay degi doonto harada sharafta leh ee Titicaca.
Cimilada harada Titicaca
Cimilada harada Titicaca waxay ku xidhan tahay joogga ay ku fadhido, waa haro in ka badan 3.000 oo mitir ka sarraysa heerka badda, iyada oo heerkul aad u weyn uu u dhaxeeyo habeen iyo maalin. Heerkulka wuxuu gaari karaa ilaa 25°C maalintii iyo 0°C habeenkii.
Celceliska heerkulka harada sannadlaha ah ayaa lagu go'aamiyay inuu noqdo 13 ° C. Dhankeeda, heerkulka dusha sare ee biyuhu wuu kala duwan yahay inta u dhaxaysa 11 iyo 25 darajo Celsius bisha Ogosto iyo inta u dhaxaysa 14 iyo 35 darajo Celsius bisha Maarso.
Waxa laga yaabaa inay yara yaabto in joogitaanka dhererkaas heerkulka maalintii uu aad u diiran yahay, tanina waa sababta oo ah harada Titicaca waxay nidaamin kartaa heerkulka sababtoo ah waxay nuugtaa tamarta qorraxda inta lagu jiro maalinta, taas oo ku taal agagaarka harada. Habeenkii tamartani waa ay ka ifaysaa, markaa heerkulku maaha mid qabow sidii aan filaynay.
Inta badan biyaha harada Titicaca ayaa waxaa ku lumay uumi-bax, waana arrin aad uga daran meelaha qaar ee ay ka sameysan yihiin dabaqyo milix ah, sababtoo ah macdanta ku jirta harada waxaa lagu daraa webiyada oo lagu shubo.
Waxaa lagu qiyaasaa in kaliya 5% biyaha harada ay ku shubtaan wabiga Desaguadero inta lagu jiro xilliga biyaha sare, kaas oo ku qulqulaya harada Poopó, taas oo ka milix badan harada Titicaca. Biyaha ka soo qulqulaya harada Titicaca waxay dhab ahaantii ku dhammaadaan Salar de Coipasa, halkaas oo qadarka yar ee biyuhu si degdeg ah u baxaan.
Sifada kale ee lagu garto biyo-mareenkeeda ayaa ah in wabiyada ka kooban biyo-mareenada ay aad u gaaban yihiin, waxaana webiyada Ramis, Asangaro iyo Calabaya lagu tilmaamay inay yihiin kuwa ugu waaweyn uguna dheer, kuwaasoo uu Ramis yahay kan ugu dheer 283 km.
Biyo-mareenada biyo-mareennada ayaa ah mid hooseeya oo aan joogto ahayn, waxaana wax-soo-saarkooda lagu qiyaasaa roobabka xilliyeedka, kuwaasoo da'a inta u dhexeysa bilaha December iyo March, halka abaarta ama la'aanta roobabku ay ku beegan yihiin inta u dhexeysa bilaha Juun iyo November.
Qaybaha harada Titicaca waxaa lagu gartaa jiirar aad u yar, taas oo ah sababta ay dhaqankoodu u qallafsan yihiin, taas oo ah, sinuous, taas oo macnaheedu yahay in aysan jirin wax qallafsan, tani waxay saameynaysaa daahfurnaanta, nooca xayawaanka iyo dhirta ee la xidhiidha nidaamka.
Biyaha harada Titicaca waxaa lagu gartaa inay yihiin biyo caajis ah mana jiraan habab lagu go'aamiyo, lagu xakameynayo laguna kormeerayo tayada biyaha. Dhab ahaantii, muunad la sameeyay waa mid gaar ah, taas oo ah. In badan oo ka mid ah oogada harada ayaan arrintan laga baran. Si kastaba ha ahaatee, biyaha hadda leh gacanka Puno ayaa la og yahay inay wasakhaysan yihiin maadaama biyaha wasakhda ah ee magaalada lagu shubo iyaga oo aan waxba laga qaban.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto harada Titicaca iyo sifadeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Lake Titicaca
Foolkaanada Hunga Tonga oo qaraxday ayaa laga dareemay dalka Spain